भारतीय खसीबोका नेपाल भित्रीपपछि… « Postpati – News For All
असोज २२, काठमाडौं । नेपाल–भारत खुला नाकाबाट अवैध रूपमा भारतीय खसीबोका नेपाली बजारमा भित्रिने गरेको पाइएको छ । परीक्षणबिना नेपाली बजारमा भारतीय खसीबोका अवैध रूपमा बजारमा आउँदा नेपाली खसीबोका व्यवसाय मर्कामा परेका छन् ।
कैलाली लंकीका खसीबोका व्यवसायी दल्सी साहीले रौतहट बोटव, सिन्धुलीलगायतका खुला नाकाबाट दैनिक ३ सय देखि ४ सय खसीबोका अवैध रूपमा आउने गरेको दाबी गरे ।
भारतबाट भन्सार छली अवैध रूपमा आएका खसीबोका प्रतिकेजी नेपाली भन्दा सस्तो पर्ने भएकाले पनि नेपालमा उत्पादन भएका खसीबोकाले बजार नपाएको उनको भनाइ छ ।
भारतबाट आयात हुने खसीबोकाको क्वारेन्टिन प्रमाणपत्रबिना भन्सारबाट आयात गर्न नपाइने हुँदा यो वर्षमा भारतबाट नेपाली बजारमा नभित्रिएको जिकिर
उनका अनुसार सामान्य अवस्थामा काठमाडौं उपत्यकामा दैनिक ७ सयदेखि १ हजार खसीबोकाको माग हुन्छ । चाडवर्पमा ३ हजार देखि ५ हजारमासम्म खसीबोकाको माग हुन्छ ।
पशुसेवा विभागका महानिर्देशक डा. वंशी शर्माले नेपालमा खसीबोका उत्पादन पर्याप्त हुँदा कुनै पनि तरिकाले भारतबाट भारतीय खसीबोका नआएको दाबी गरे । उनले भारतबाट आयात हुने खसीबोकाको क्वारेन्टिन प्रमाणपत्रबिना भन्सारबाट आयात गर्न नपाइने हुँदा यो वर्षमा भारतबाट नेपाली बजारमा नभित्रिएको जिकिर गरे ।
उनले भारतबाट आयात गर्दा भन्सार शुल्क लाग्ने हुँदा बढीका भारतीय खसीबोका व्यापारीले अहिले आयात नै नगरेको बताए । महानिर्देशक डा. शर्माले गतवर्ष दसैंलाई खसीबोका केही कम हुने देखेपछि १५ हजार खसीबोका आयात भएको त्यसपछि भारतीय खसीबोका आयात नभएको जानकारी गराए ।
उनले नेपालमा वार्षिक खसीबोका बाख्रा १ करोड २५ लाख उत्पादन हुने बताए । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा कौशिला कुँवरले लेखेकी छिन् ।